Saddex qof oo ku geeriyootay Shil ka dhacay Degmada Hodan ee M... | Universal Somali TV
Saddex qof oo ku geeriyootay Shil ka dhacay Degmada Hodan ee Magaalada Muqdisho.
Wararka naga soo gaaraya Degmada Hodan ee Bartamaha Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in shil gaari oo sababay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay Wadada Taleex.
Inta la ogyahay Saddex qof ayaa shilkaasi ku geeriyootay halka dhaawacyana ay jiraan kadib markii uu rogmaday Mid kamid ah Gawaarida waaweyn ee Xamuulka qaaday ee ka soo baxa Dekeda Muqdihso, wuxuuna ku fariista gaari ay dad shicib ah saarnaayeen.
Qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa sheegay iney durbadiiba ugurmadeen Dadkii goobta ka agdhawaa, waxeyna sheegeen in dhaawcayada ay kujiraan dad wadada lugeynayay oo shilku saameeyay.
Masuuliyiin katirsan Maamulka Degmada Hodan ayaa gaaray goobta uu shilku ka dhacay oo ah Dalcada Taleex oo gawaarida waaweyn ee Tanka culus wada ku adkaato iney dalacada fuulaan marka ay doonayaan iney ugudbaan dhanka Bakaaraha.
Saraakiisha Caafimaadka ayaa la tacaalaya baxnaaninta dadka dhaawacyada qaba oo qaarkood jajab uu ka muuqdo, Waxaana goobta uu shilku ka dhacay markii dnabe noqotray mid caadi ku soo laabata maadaama shilka uu saameeyay isu socodka wadada.
Kan-xigaSAWIRRO: Duqa Muqdisho oo amray in la...
Kan-horeBurlington: Gabar Somali ah oo dhaawa...
40,807,010 unique visits